Podcast 10x19: Musi waKurume 25 tichava neshoko rekutanga | Ndinobva mac
Podcast 10 × 19: Musi waMarch 25 tichava neshoko rakakosha
Nezuro Chipiri raive zuva riine nhau zhinji dzakanangana nezvirongwa zvemangwana zveiyo Cupertino-based kambani. Kune rumwe rutivi, tinowana musi waMarch 25 sezuva rinogona kuitika reApple kubata chiitiko chehurukuro yeAirPods itsva uye yakavandudzwa iPad Mini. Pane rimwe divi, Isu zvakare tine zuva reWWDC 2019, chiitiko chichaitwa kubva munaJune 3-7.
Tataurawo nezvazvo Runyerekupe rwazvino rwakatenderedza mabasa ayo echizvarwa chechipiri cheAirPods chichava nacho uye mutengo uyo wakamirirwa kwenguva refu AirPower kuchaja base inogona kuve nayo: $ 150. Uye zvakare, takakurukurawo nhau idzo chizvarwa chitsva chePad 2019 chingaunze uye kuti iyo Mini Mini 5 ingave sei, chishandiso chakaita senge chakatemwa kukanganikwa.
Chipiri chega chega, vapepeti veSoy de Mac uye Actualidad iPhone vanosangana kutepfenyura zviripo paYouTube chikamu chitsva cheiyo podcast, podcast iyo unogona kutevera kurarama kuburikidza negero redu uye taura pamusoro penyaya dzatinokurukura gara nevamwe vateereri. Rangarira kumisa bhero kugamuchira iyo inoenderana inozivisa kana nhepfenyuro yatanga.
Iwe unogona zvakare titevere isu kuburikidza neSpotify, kupi iyo podcast inowanikwawo, zvese kune vashandisi vanoshandisa iyo yakabhadharwa vhezheni, uye neyemahara vhezheni. Spotify irikubheja zvakanyanya pama podcast uye isu hatigone kusiiwa kunze kwepuratifomu inotungamira pasirese yemimhanzi inoyerera nevamiririri vane mamirioni 96.
Kana iwe ukashandisa iyo Apple's Podcast application kana iwe unotiteerera kuburikidza iTunes, iwe unogona kunyorera kuburikidza neiyi link kuitira kuti zvikamu zvese zvitsva zvatinoisa zvinyorwe pasi pachishandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Podcast 10 × 19: Musi waMarch 25 tichava neshoko rakakosha
OnLeaks anoti isu tichaona iyo AirPods 2 muna Gumiguru